टिकटकमा फिल्टरहरू कसरी परिवर्तन गर्ने: फिल्टरहरू परिवर्तन गर्न सरल ट्यूटोरियल | क्रिएटिभ अनलाइन
स्रोत: संगीत र बजार
आज सबैभन्दा धेरै भाइरल भएको अर्को उपकरण निस्सन्देह टिकटक हो। यो मनोरञ्जनको लागि डिजाइन गरिएको अनुप्रयोग मात्र होइन, तर यो पनि प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रयोग गर्न आएको छ जस्तै: प्रभावशाली, फुटबलर, अभिनेत्री र अभिनेता, कलाकार आदि।
तर यसमा यो प्रकार्य मात्र छैन, तर यो ठूलो कलात्मक र रचनात्मक भाग द्वारा पूरक पनि छ। यहाँ हामी फोटो फिल्टरहरू मर्ज गर्छौं.
यस पोष्टमा, हामी तपाइँलाई केहि सरल चरणहरूका साथ व्याख्या गर्नेछौं, यी फिल्टरहरू कसरी परिवर्तन गर्ने र साथै, हामी तपाइँलाई केहि प्रतिनिधि फिल्टरहरू देखाउनेछौं।
1 टिक टक
1.2 यसले के समावेश गर्दछ
2 फिल्टर वा प्रभावहरू कसरी परिवर्तन गर्ने
2.1 फिल्टरहरू थप्नुहोस् वा परिवर्तन गर्नुहोस्
3 सबै भन्दा राम्रो फिल्टर
3.1 क्रोमा (हरियो स्क्रिन)
3.2 म हराएको छु
3.3 बेकार ऐना
3.4 अनुहार जूम
3.5 टाइम वार्प स्क्यान
यदि तपाइँ ती व्यक्तिहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जो अझै पनि टिकटकको संसारबाट अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई यो अनुप्रयोगले के गर्न सक्षम छ भन्ने बारेमा एउटा सानो सारांश दिनेछौं, र तपाइँ बुझ्नुहुनेछ कि यो हाम्रो समाजमा किन यति फेसनशील छ। ।
टिकटक एसियाली मूलको एप्लिकेसन हो, अर्थात, यो एशिया मा स्थापित भएको थियो। यस अनुप्रयोगको सबैभन्दा विशेषता भनेको यसको सहजता हो साझा गर्न वा संगीत भिडियोहरू सिर्जना गर्न। अनुप्रयोग सेप्टेम्बर 2016 मा लन्च गरिएको थियो, अर्थात्, यसलाई विकास गर्न मात्र 200 दिन लाग्यो, त्यसैले यो देखिन्छ कि तिनीहरूसँग एकदम स्पष्ट विचार थियो।
यसको बृद्धिमा पनि उत्कृष्ट गति रहेको छ, किनकि चिनियाँ पोर्टलका अनुसार, अनुप्रयोगले दैनिक 66 मिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा पुगेको छ, जबकि अन्य स्रोतहरूले यो पहिले नै 130 मिलियन अवरोधहरू पार गरिसकेका छन्।
यदि हामी यसको कार्यहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने, हामी आफैलाई आधार बनाउन सक्छौं कि यसले सिर्जना गर्न, सम्पादन गर्न र अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ संगीत भिडियो सेल्फीहरू 1 मिनेट, विभिन्न प्रभावहरू लागू गर्न र संगीत पृष्ठभूमि थप्न सक्षम हुँदै। यसमा केही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यहरू पनि छन्, र आँखा पक्रने विशेष प्रभावहरू, फिल्टरहरू, र संवर्धित वास्तविकता सुविधाहरू।
अडियोभिजुअल सामग्रीसँग काम गर्ने उहाँको तरिका एकदम सरल छ, र प्रयोग गर्न-सजिलो सम्पादन विकल्पहरू समावेश गर्दछ ताकि सबैले उत्कृष्ट सम्पादन कौशल बिना रमाइलो भिडियोहरू बनाउन सक्छन्। थप रूपमा, अनुप्रयोगले अन्य प्रकार्यहरू समावेश गर्दछ जस्तै सन्देशहरू, भोटहरू, मित्र सूचीहरू पठाउने क्षमता र पक्कै पनि अनुयायीहरूको प्रणाली र पछ्याइएको। इन्स्टाग्रामको शैली जस्तै, तर भिडियोहरूमा केन्द्रित।
भिडियोहरू बाहेक, सामग्री प्रकाशन मोडले तपाईंलाई आफ्नो मनपर्ने फोटोहरूको श्रृंखलाबाट स्क्रोल गर्न मिल्ने भिडियोहरू सिर्जना गर्न दिन्छ। थप रूपमा, अनुप्रयोगले एउटा खण्ड पनि समावेश गर्दछ जसमा तपाईंले अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्देशहरू पठाउन सक्नुहुन्छ जसरी तपाईं इन्स्टाग्राममा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंको प्रोफाइल र तपाईंले आफ्नो बारेमा भन्नुभएको डाटा पनि सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले के समावेश गर्दछ
एप्लिकेसनले मुख्य स्क्रिन समावेश गर्दछ जहाँ हामी सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियोहरू वा हामीले पछ्याउने व्यक्तिहरू हेर्न सक्छौं, भिडियोहरू मार्फत जान माथि वा तल स्लाइड गर्न सक्षम हुँदै। पनि त्यहाँ एक अन्वेषण पृष्ठ छ जसमा हामी क्लिपहरू खोज्न वा ह्यासट्यागहरू बीच नेभिगेट गर्न सक्छौं त्यो रोचक हुन सक्छ। जब हामी भिडियो हेर्छौं, यो पूर्ण स्क्रिनमा देखाइन्छ, दायाँ तिर आइकनहरूको एक श्रृंखलाको साथ जसको साथ हामी प्रयोगकर्तालाई फलो गर्न, लाईक गर्न, टिप्पणी गर्न वा क्लिप साझेदारी गर्न सक्छौं।
छोटकरीमा, यो एउटा सामाजिक सञ्जालको रूपमा कार्य गर्ने एउटा अनुप्रयोग हो, तर तपाईंलाई अन्य अनुप्रयोगहरू भन्दा बढी कलात्मक र अडियोभिजुअल सामग्रीसँग काम गर्न अनुमति दिन्छ। एप्लिकेसन आईओएस र एन्ड्रोइड दुवैको लागि उपलब्ध छ, र यो पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ। यो सत्य हो कि एप्लिकेसन भित्र तपाईले सम्पादन विकल्पहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जसलाई अतिरिक्त लागत चाहिन्छ, तर यसको सम्पूर्ण रूपमा, यो निःशुल्क छ।
केन्द्रमा तपाइँसँग बटन पनि छ जहाँ तपाइँ अनुप्रयोगको मुख्य नायक, यसको भिडियो रेकर्डिङ र सम्पादन उपकरण पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो भिडियोहरू धेरै टेकहरूसँग रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले सम्बन्धित बटन थिचिरहँदा मात्र एपले रेकर्ड गर्छ। निस्सन्देह, तपाईंले भिडियो रेकर्ड गर्न सुरु गर्नु अघि तपाईंसँग फिल्टरहरू र प्रभावहरूका लागि धेरै विकल्पहरू छन् जसलाई नियन्त्रण गर्न।
भिडियो सम्पादन गर्दा, तपाईं आफैले अन्य प्रकारका प्रभावहरू थप्नको लागि लिने वा चरणहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंसँग इन्स्टाग्रामको जस्तै फिल्टरहरूको श्रृंखला छ भिडियोहरू हेरफेर गर्न विभिन्न प्रकारका प्रभावहरू। सम्पादकले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चिन्ह लगाउनेछ जसमा तपाईंले भिडियोलाई विभिन्न रङहरूमा सम्पादन गर्नुभएको छ।
सबै टिकटोक राजस्वको २०% अमेरिकाबाट आउँछ यो वास्तवमा पहिले भन्दा कम हो र चीन, ६९% संग, अझै पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। विज्ञापनको आगमन हुनु अघि, ४२% आम्दानी संयुक्त राज्यबाट आयो, तर यसले एन्ड्रोइडमा एपको चिनियाँ संस्करणबाट हुने राजस्वलाई समावेश गर्दैन।
TikTok को प्रयोगकर्ता आधार अझै पनि Musical.ly सँग मिल्दोजुल्दो छ। यो उपकरण प्रयोग गर्ने यसका धेरैजसो यूएस प्रयोगकर्ताहरू जवान छन् र 25.8% 18 र 24 वर्षका बीचका छन्। 24.5% 25-34 वर्षका छन्, जसले सुझाव दिन्छ कि धेरै Tik Tok प्रयोगकर्ताहरूले 25 वर्षको भए पनि एप प्रयोग गरिरहेका छन्।
En 2019 भारतीय सांसदहरू टिकटकको बारेमा यति चिन्तित थिए कि उनीहरूले एपलाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे। TikTok ले बच्चाहरूलाई अनुपयुक्त सामग्रीमा पर्दाफास गर्ने भनेर उनीहरू चिन्तित थिए। जबकि प्रतिबन्ध लामो समय सम्म टिकेन, यसले एपलाई लगभग 15 मिलियन नयाँ प्रयोगकर्ताहरू खर्च गर्यो।
फिल्टर वा प्रभावहरू कसरी परिवर्तन गर्ने
फिल्टर वा प्रभावहरू प्रयोग गरिन्छ निजीकृत गर्न र तपाईंको भिडियोहरूमा थप विवरणहरू थप्न। यी प्रभावहरू भिडियो रेकर्ड गर्नु अघि र पछि थप्न सकिन्छ, तर केही प्रभावहरू रेकर्डिङ सुरु हुनु अघि मात्र उपलब्ध हुन्छन्, र अरू पछि उपलब्ध हुन्छन्।
टिकटकले देखाउने केही प्रभावहरूसँग भिडियो रेकर्ड गर्न, तपाईंले यी चरणहरू पालना गर्न आवश्यक छ:
क्यामेरा स्क्रिनमा रातो रेकर्ड बटनको बाँयामा प्रभाव प्रतिमा थिच्नुहोस्।
हेर्नुहोस् र प्रभावहरूको विभिन्न कोटीहरूको खोजी गर्नुहोस् र ती मध्ये एकमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रभावहरू पूर्वावलोकन गर्नुहोस् र एउटा छान्नुहोस्।
रेकर्डिङ स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो भिडियो बनाउन सुरु गर्नुहोस्।
यदि हामी बचत गर्न चाहन्छौं भने प्रभाव बचत गर्नु हो, त्यसको लागि हामीसँग मनपर्ने विकल्प छ। मनपर्ने विकल्प स्क्रिनमा, बुकमार्क प्रतिमा को रूप मा पाइन्छ। तपाईले चाहानु भएको प्रभाव छान्नु पर्छ र हामीले उल्लेख गरेको आइकन थिच्नु पर्छ। यस विकल्पको साथ तपाइँ सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि प्रभाव सधैं तपाइँको पहुँच भित्र छ, र यो धेरै सरल र सरल तरिकामा प्राप्त हुन्छ।
फिल्टरहरू थप्नुहोस् वा परिवर्तन गर्नुहोस्
शीर्षक जस्ता प्रभावहरू परिवर्तन गर्न, तपाईंले निम्न चरणहरू पालना गर्नुपर्छ:
सम्पादन स्क्रिनको तलको पाठमा ट्याप गर्नुहोस्।
इच्छित फन्ट चयन गर्नुहोस् र पाठ र पृष्ठभूमि को रंग अनुकूलित गर्नुहोस्।
ट्याप गर्नुहोस् र यसलाई सार्न पाठ तान्नुहोस् तपाईंको भिडियोमा इच्छित स्थानमा।
फिल्टर वा प्रभाव पुन: आकार वा परिमार्जन गर्न:
पाठलाई संक्षिप्त वा ठूलो बनाउनुहोस् र आकार समायोजन गर्नुहोस् तपाईंले इच्छित प्राप्त नगरेसम्म पाठको।
यदि हामी स्टिकर वा इमोजी थप्न चाहन्छौं:
सम्पादन स्क्रिनको तल स्टिकरहरू थिच्नुहोस्।
स्टिकर वा इमोजिस ट्याब चयन गर्नुहोस्, वा एनिमेटेड GIF छविहरू खोज्नुहोस्।
यसलाई चयन गर्न वांछित तत्वमा क्लिक गर्नुहोस् र स्क्रिनमा कहीं पनि एनिमेसन तान्नुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो फिल्टर
केहि उत्कृष्ट फिल्टरहरू हुन्:
क्रोमा (हरियो स्क्रिन)
यस फिल्टरसँग सम्भावनाहरू लगभग अनन्त छन्, किनकि तपाईले चाहानु भएको पृष्ठभूमि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थोरै विचार दिनको लागि, यसको लोकप्रियतामा, यस फिल्टरसँग 74.7 मिलियन भिडियोहरू छन्।
म हराएको छु
यो फिल्टर आफ्नो अनुहार देखि आफ्नो आँखा र आफ्नो मुख अलग, तिनीहरूलाई निर्जीव वस्तुहरूमा वा प्रसिद्ध अनुहारहरूमा परिचय गराउन सक्षम हुनु।
मूलतः, यसले छविलाई विकृत गर्नेछ र छविमा धेरै लहरहरू सिर्जना गर्नेछ। यसको फाइदा उठाउन कल्पनाको पट्टी।
यो प्रभाव अनुहारमा जूम इन हुनेछ जब तपाईं हिँड्नुहुन्छ। यो अहिलेसम्म १ करोड ३ लाख भिडियोमा प्रयोग भइसकेको छ ।
टाइम वार्प स्क्यान
यो फिल्टरले नीलो रेखा माथिको भागलाई फ्रिज गर्नेछ, र यसको साथ तपाईंले केही साँच्चै रमाइलो चालहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा, Tik Tok विश्वभर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने एप बनेको छ। हामी भन्न चाहन्छौं कि यसको लक्ष्य युवा र वयस्क प्रयोगकर्ता दुवै हो। यो एउटा सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने एउटा एप्लिकेसन हो, किनकि उल्लेख गरिएअनुसार, यसमा धेरै अनुयायीहरू छन्।
विश्वका धेरै भाइरल भिडियोहरू यस उपकरणबाट आउँछन्, र यो कथन अचम्मको कुरा होइन, किनकि टिकटकले फेसबुक र इन्स्टाग्रामको तुलनामा धेरै फलोअरहरूको संख्यामा प्रयोगकर्ताहरू पुगेको छ।
अब तपाइँको लागि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न र तपाइँको आफ्नै सामग्री सिर्जना गर्न सुरु गर्ने समय हो। तपाइँ केहि आधारभूत, एक साधारण भिडियो संग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको आफ्नै रचनात्मकता र व्यक्तित्व के हुनेछ सुरु गर्नुहोस्। फिल्टरहरू र म्युजिकल अडियोहरू थप्नुहोस्, तपाईंले के चाहनुहुन्छ वा गर्न चाहनुहुन्छ भनेर बताउने केही अन्य पाठ थप्नुहोस् र पक्कै पनि, तपाईंसँग मिल्दोजुल्दो वा पूर्णतया फरक सामग्री सिर्जना गर्ने अन्य प्रयोगकर्ताहरूको खोजी र अवलोकन गर्नुहोस्।
के तपाईंले यसलाई अहिलेसम्म डाउनलोड गर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » Tik Tok मा फिल्टर कसरी परिवर्तन गर्ने
रचनात्मक लोगो कसरी डिजाइन गर्ने
छविबाट रंगहरू कसरी निकाल्ने